China Tactical Military Sniper Dọrọ akpa 53 inch ogologo emeputa na soplaya |Lousun
*Akwa siri ike --- Ejiri nnukwu ọrụ ụlọ ọrụ 600D oxford polyester w.2 ugboro PVCmkpuchi, mkpuchi mmiri, na-adịgide adịgide, na-eguzogide mmiri.
* Padding ---Epe nke 1.8cm ọkpụrụkpụ nke nwere ezigbo njupụta na ngbanwe, nchebe karịaime egbe.
* Ngwa ngwa --- Ya na teepu kpara agba dabara adaba na-ebu eriri na eriri ubukpọgidere site nko n'akụkụ abụọ, n'elu, n'ebe ahụ'sa kpara teepu nghọta loop.E ahụ's 2 nnukwuakpa zipa n'ihu iji chekwaa obere akpa, ngwa, ngwa ọrụ wdg.
Akpa Sniper Drag Tactical, Akpa Sniper Dọkịta ndị agha, ikpe egbe
Uru:1.Sistemụ imepụta ụkpụrụ, anyị nwere ezigbo CAD na-eme ebe a, yabụ anyị nwere ike bụrụ ọkachamaraahaziriọrụ.
2.NO RISK after-sales Service: biko echegbula ma ọ bụrụ na Ọ dịghị onye ga-ahụ maka gị ma ọ bụrụ na ọ bụla àgwà nsogbu mere, pls zitere anyị email ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla, anyị ga-enyere aka dozie ya ngwa ngwa.
3.Quality, ndị otu anyị na-agbaso ụkpụrụ AQL 2.5-4.0 maka akpa ọ bụla's ịlele, ya mere, mgbe niile anyị na-enye kwụsiri ike mma na oversea ahịa, anyị bụ a n'ụwa nile ama emeputa nke ukwuu mma naọnụ alagia.
4.Any logo customization anyị nwere ike ịnakwere, eg embroidery, roba patch, nyefee ebipụta, ihuenyo ebipụta.…ihe niile anyị nwere ike ịnakwereahaziriọrụ.
A na-eji akpa sniper na-adọkpụ na-eme ihe n'ọtụtụ ebe maka ụzọ aghụghọ / agha na ịgba égbè, na EPE / EVA padded iji chebe egbe site na ịdọka, ịcha na wdg.enweghị atụihe mberede.
Nke gara aga: Akpa OEM ịchụ nta / agbapụ egbe nwere akwa ụfụfụ akwa
Osote: OEM ịchụ nta otu akpa égbè 53 inch ogologo
aluminom egbe ikpe
ụdị egbe egbe
Ụgbọ elu igbe egbe
Onye na-ebu egbe
egbe egbe agha
Sniper agha na-ebu akpa multipocket
Ndị agha Sniper Dọrọ akpa
Usoro mbufe ngwa agha akọ
kenkwucha agha gera
Akụrụngwa agha egbe akpa
kenkwucha agha mkpuchi egbe
Akpa sniper agha nwere ike ịdọrọ akpa 53 inch ogologo
Akpa kenkwucha agha soft egbe
kenkwucha égbè ikpe
kenkwucha adụ egbe ikpe
Ịchụ nta agbapụ agba egbe okpukpu abụọ
OEM ịchụ nta / agbapụ égbè mkpuchi na ogbo ...
Ịchụ nta agbapụ mmiri na-adịghị egbochi égbè ikpe 45 inch ...
N'èzí agbapụ waterproof akpa 53 inch l ...
OEM ịchụ nta / agbapụ waterproof akpa egbe 47 na ...